आरोप–प्रत्यारोपमा नलागौं, जनताको काममा जुटौं : महत
नेपालगन्ज, १ जेठ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आरोप–प्रत्यारोपमा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीलाई बलियो बनाउन एक अर्कामाथि आरोप थुपार्नुभन्दा पनि जनताको काममा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
पार्टीको संगठनलाई अब नयाँ ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । कांग्रेस बांके जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उनले विगतका विवादलाई बिर्सेर सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
बाजपेयीको अन्त्येष्टिमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नयाँदिल्लीमा
काठमाडौं, १ भाद्र । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीको अन्त्येष्टिमा भाग लिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली गएका छन् ।
अख्तियारको दोस्रो शिकार नापी अधिकृत
राकेश यादव, रौतहट, १ भाद्र । रौतहट जिल्लामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाको टोलीले बिहिबार लगातार दोस्रो शिकार गरेको छ ।
डा. झा चीनमा पुरस्कृत
काठमाडौं, १ भाद्र । सियानमा रहेर चीनको आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा विशेष योगदान पु¥याएको भन्दै प्राध्यापक डा. राजीवकुमार झालाई चीनको सियान सरकारले सन् २०१८ का लागि ‘सियान फ्रेण्डसिप अवार्ड’ पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री बाजपेयीको निधन
काठमाडौं, १ भाद्र । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीको ९४ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । निष्ठावान राजनीतिज्ञको परिचय बनाएका बाजपेयीलाई मिर्गौला, छाती र पिसाबसम्बन्धी समस्या देखिएपछि गत ११ जुनमा नयाँदिल्लीस्थित
नैतिक मूल्यसहितको सभ्य समाज निर्माणका लागि अध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक : प्रदेश प्रमुख झा
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, १ भाद्र । नैतिक मूल्यसहितको सभ्य समाज निर्माणका लागि अध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक रहेका प्रदेश ५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बताएका छन् ।